I-Ptengine: Amamephu Wokushisa, Umkhankaso, Ukulandelela Ukuguqulwa kanye Nezibalo | Martech Zone
I-Ptengine: Amamephu Wokushisa, Umkhankaso, Ukulandela Ukulandela kanye Nezibalo
NgeSonto, uDisemba 27, i-2015 NgoMgqibelo, July 8, 2017 Douglas Karr
Ngenkathi ziningi analytics amapulatifomu emakethe ayizinsalela zobuchwepheshe obudlulile emashumini amabili eminyaka ubudala, ubuchwepheshe obusha bugxile kakhulu ekuziphatheni komsebenzisi nasekuhlaziyweni kofanele wokuguqula. Ama-heatmaps ayizindlela ezinhle zokubona ukuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani ngokuhamba kwesikhathi ngesakhiwo sesayithi lakho, ukuzulazula nokubizelwa esenzweni. I-Ptengine inikeza iqoqo lamathuluzi akhelwe ngqo lezi zinhloso.
Ukuhlaziywa Kwemephu Yokushisa - Qhathanisa amamephu wokushisa phakathi kwamakhasi ahlukene, izinkathi zesikhathi, namasegmenti angenamkhawulo ukuze ubone ngeso lengqondo indlela yokuziphatha kwezivakashi ezahlukahlukene.
Chofoza i-Heatmap - Bona ngeso lengqondo idatha yokuchofoza ngokubona nge-thermographic, unikeze ukuqonda okusheshayo nokulula kokuziphatha kwabavakashi.
Ukunakwa Heatmap - Idatha eqoqiwe inikeza ubufakazi bokuthi izivakashi zigxila kuphi kakhulu, zisiza ukuthola ukubekwa kahle kwezikhangiso, inikezela ngemininingwane esemqoka lapho kuklanywa futhi kuklanywa kabusha amakhasi okufika, kunciphisa ukulahlwa kwenqola yokuthenga, kukhulisa ukuguqulwa kwamafomu aku-inthanethi, futhi ibikezela ukuthi izivakashi zizoyisebenzisa kanjani iwebhusayithi yakho ngokuzayo .
Ukuqapha Kwamadivayisi Amaningi - amathrekhi futhi ahlaziye idatha evela kuwo wonke amadivayisi futhi isekela amasayithi akhiwe ngomklamo ophendulayo.
Ukuhlaziywa Kwekhasi - ithuluzi eliqinile lokuhlaziya ukuqoqa inani lokuchofozwa ezintweni ezibandakanyayo nezingasebenzi. Kungakhathalekile i-elementi, thola ukuqonda ngenombolo ngqo yokuchofoza izinkinobho zakho, izithombe, amavidiyo, amamenyu awela phansi nokuningi.
Skrolela Finyelela Imephu - imbondela yokuchofoza nokunaka imephu yokushisa ukuze unikeze iphesenti langempela lezivakashi eliphenya ezingxenyeni ezithile zekhasi lakho. Thola ukuqonda okuphelele kokuthi kungani izivakashi zakho zihamba lapho zifika kuwebhusayithi yakho.
Izibalo zeqembu - Usebenzisa i-Head Match, i-End Match, i-Match eqondile, ne-Regex, i-Ptengine inikeza izindlela ezahlukahlukene zokuhlaziya amakhasi anezici ezifanayo, njengezicathulo ezinemibala ehlukene, izimoto ezinamamodeli ahlukene, izindatshana zabalobi abahlukene, amakhasi okufika anama-URL ahlukile. Yonga isikhathi osichithe ukulungisa kabusha i-URL yomkhankaso ekhona.
Imikhankaso - dala i-URL yomkhankaso (noma fanisa ekhona), uphinde uhlaziye ithrafikhi ngegama, umthombo, okuphakathi, isikhathi, nokuqukethwe.
Imijondolo Yokuguqulwa - Funda ukuthi izivakashi zikuyeka kuphi futhi kungani ukuvakasha kwazo, nokuthi zizulazula kanjani kuwebhusayithi yakho yonke. Faka isicelo se-Heatmap kaPtengine analytics ku-Funnel yakho Yokuguqula futhi uguqule izivakashi zibe amakhasimende.
Ukubuka konke kwezivakashi zesikhathi sangempela - Qoqa idatha kumthamo womsebenzisi ofanayo, okukuvumela ukuthi wenze ukulungiswa kokukhangisa okusheshayo nokusebenzayo.
Izibalo Zendawo - Ngesikhathi sangempela, khomba abasebenzisi izindawo ezikuyoImininingwane Yesivakashi
Imininingwane Yesivakashi - qapha yonke idatha ebalulekile yezivakashi ezifanayo, njengemisebenzi, ukuzulazula kokuqukethwe, amasistimu okusebenza, iziphequluli zewebhu, namakhasi okudlulisa.
Tags: ukunaka imephu yokushisaukunaka i-heatmapchofoza imephu yokushisachofoza i-heatmapizibalo zemephu yokushisaukushisa amabalazweimephu yokushisaI-Ptengine
Amasu wokuThola Amakhasimende ahamba phambili ku-inthanethi